About Us - Chao Yu Makiinado Co., Ltd
Xiangshan Chaoyu Makiinado Warshadaha Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa mid ka mid ah 100 top qaranka gobollada ee Zhejiang Gobolka County Xiangshan Industrial Park, Xiangshan saarney waa magaalo qurux badan oo qoto dheer. Waxaa dhagan ku dhex yiil waddada Hangyong la beddelo, gaadiidka waa mid aad u sahlan.
Waqtigan xaadirka ah, shirkadda daboolayaa meel ka mid ah ilaa 1 milyan oo mitir oo laba jibbaaran. Iyada oo qalabka wax soo saarka sare. Sano ee la soo dhaafay ka dib markii, la horumarka joogtada ah iyo horumarka, la xirrira set oo ah khadadka-soo-saarka horumarinta wax soo saarka cusub oo ka hawlgala iyo network iibka xoog leh in mid ka mid ah golaha wasiirada gaar ah saldhig wax soo saarka.
Shirkadda ayaa xoog xoog farsamo, complete qalabka processing farsamo, tayada wax soo saarka, adeeg-iibka ka dib waxaa si waafaqsan heerarka caalamiga ah ISO9000 maaraynta, si ay u siiyaan macaamiisha badeecooyinka iyo adeegyada tayada. Isla mar ahaantaana, shirkadda ay diiradda saaraan horumarinta technology iyo horumarka cusub ee wax soo saarka, si ay wax soo saarka ee jagada hoggaamineed ee warshadaha.
Company noqon doonaa tayo wanaagsan leh, qiimaha la awoodi karo iyo adeegyada fakarsan sidii ujeeddada ganacsiga. In this, shirkadda dhammaan shaqaalaha shirkadda si ay u daryeelaan iyo taageero macaamiisha aan shirkadda iyo asxaabta u jeedinayaa mahad tiiraanyo leh!